Suldaan Naaleeye: oo Kashifay“Shirka Kismaayo Dowladda waxa uu ku yahay Khatar? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Suldaan Naaleeye: oo Kashifay“Shirka Kismaayo Dowladda waxa uu ku yahay Khatar?
Suldaan Naaleeye: oo Kashifay“Shirka Kismaayo Dowladda waxa uu ku yahay Khatar?
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose waxaa Maalinta Axadda ah ee Todobaadka Soo socda lagu wadaa in uu ka dhaco Shirka Madaxda Dowladda Goboleedyada ay kaga arrinsanayan Go’aan ay ku mideysan yihiin oo ay ku wajahaan Dowladda Federaalka.
Suldaanka Xuseen Xasan Maxamed (Naaleeye) ayaa Warbaahinta u sheegay in shirkaan abaabulkiisu uu ka dhashay Xiriir ay wada sameeyeen Madaxweynaha Puntland C/Wali Max’ed Cali (Gaas) iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Max’ed Islaam (Madoobe).
Shirkaaan ayuu ku tilmaamay in lagu kala fogeynayo Dowladda Federaalka iyo Shacabka ku sugan Gobolada ay ka arrimiyaan Maamul Goboleedyada, waxa uu tusaale usoo qaatay in ay jiraan Odoyaal iyo Siyaasiyiin aanan tagi karin Deegaanada qaar kadib markii laga masaafuriyey sida u hadalka udhigay.
Xildhibaano iyo Wasiiro gaaraya 14-qof ayuu sheegay in ay ka amba baxeen Magaalada Kismaayo, iyagoona gaaray Degmada Doolow sida uu sheegay, Maamulka Jubbaland ayuu sheegay in ay qasab u hor istaagayaan Xildhibaano, Wasiiro iyo Odoyaasha dhaqanka in ay ka baxaan Magaalada Kismaayo.
dhanka kale waxa uu sheegay in shirkaan uu sabab u noqonayo bur-burka maamulka Jubbaland, maadaama uu sheegayo in uu kala qeybiyey madaxda Jubbaland.
waa uu sii hadlay waxa uuna sheegay in hadii Maamulka Jubbaland uu bur-buro uu u taagan yahay Samata bixinta maamulkaasi sida uu sheegay.
Maamulka Jubblanad ayaa sheeegay in ay ka go’an tahay qabsoomidda shirka madaxda Dowlad Goboleedyada ee Kismaayo Ka furmaya, waxayna sheegtay in shirkaan uu yahay kaliya mid ay ku midoobayaan mowqifka madaxda Dowladda Goboleedyada.